Dingana 3 hanombohana fanentanana amin'ny varotra horonantsary momba ny fandraharahana | Martech Zone
Asabotsy 6 Febroary 2016 Alahady 7 Febroary 2016 Owen Hemsath
Marketing amin'ny horonan-tsary dia eo amin'ny heriny tanteraka ary ireo mpivarotra manararaotra ny sehatra dia hijinja ny valisoa. Manomboka amin'ny filaharana amin'ny Youtube sy Google ka hatramin'ny fahazoana ireo vinavinanao lasibatra amin'ny alàlan'ny doka video Facebook, ny atin'ny horonan-tsary dia miakatra haingana hatrany an-tampon'ny newsfeed noho ny marshmallow amin'ny kakao.
Ka ahoana no hampiasanao an'io mpanelanelana malaza nefa sarotra io?
Inona ny dingana voalohany amin'ny famoronana atiny video izay manintona ny mpihaino anao?
At Videospot, izahay dia namokatra sy namoaka horonan-tsary ho an'ny mpandraharaha, orinasa ary marika hatramin'ny 2011. Niasa manokana tamin'ny fampielezana mivantana sy fampielezam-peo ho an'ny mpanazatra ambony mpandraharaha sy anarana goavambe amin'ny marketing ara-tsosialy aho.
Hainay ny mandeha, ary manana ny refy hanaporofoana izany izahay.
Henry Ford dia nanova ny indostria rehefa nampiditra tsipika fivoriambe ho an'ny famokarana fiara izy. Izany no fomba fiasa raisintsika amin'ny horonan-tsary: ​​ny dingana tsirairay avy manoloana ny hetsika video mahomby. Ny dingana voalohany amin'izany dingana izany dia ny fampandrosoana ny atiny.
Atombohy amin'ny paikadin'ny programa
Na dia alohan'ny hividianana fakantsary lafo vidy aza miaraka amin'ny tehina selfie dia tsy maintsy manangana rafitra (lohateny sy lohahevitra) aloha ireo mpivarotra izay hananganana ny fampielezana horonantsary voalohany anao. Antsoinay hoe paikadim-pandaharana nataonao ity.
Mampiasa fomba fiasa misy laharana 3 izahay amin'ny famolavolana paikadin'ny fandaharana izay hahatratra tanjona lehibe telo ho anao:
Apetraho amin'ny video ny horonan-tsarinao pejy voalohany amin'ny valin'ny fikarohana.
Ataovy toy ny a ny fomba fijerinao feo manam-pahefana.
Mandeha fifamoivoizana amin'ny pejin-tranonao na hetsika fanovana.
Na dia tokony hanana tanjona voalohany aza ny horonan-tsary tsirairay, ny Paikadin'ny votoatin'ny P3 dia tsy hanampy anao amin'ny famoronana lohateny video hisarika ny mpijery anao voalohany fotsiny fa ny fanarahana an'ity endrika ity dia hanampy anao koa handrafitra ny atin'ny horonan-tsarinao mba hitarihanao ny mpijery handray fepetra mifanaraka amin'izany.
Ny paikadin'ny atiny P3
Misintona atiny (Fahadiovana): Ity no atiny mahasarika ny mpijery anao. Ireo horonan-tsary ireo dia tokony hamaly fanontaniana apetraky ny mpihaino anao isan'andro. Ireo video ireo dia afaka mamaritra fehezan-teny na teôria koa. Amin'ny ankapobeny, ity no atiny maharitra mandrakizay.
Atosika atosika (Hub): Ity dia horonan-tsary mifantoka bebe kokoa amin'ny marikao sy ny toetranao. Amin'izany fomba izany dia miasa toy ny fantsona vlogging ny fantsonao izay manapa-kevitra amin'izay ho hitan'ny mpijery na hohenoiny ianao. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mifehy ny fandaharam-potoana ianao ary lasa "hub" ho an'ny atiny mifandraika amin'ny indostriao ny fantsonao.
Votoatin'ny Pow (Hero): Ireo ny horonan-tsarinao lehibe kokoa. Tokony hamokatra matetika kokoa izy ireo ary hiasa tsara rehefa ampiarahina amin'ireo hetsika lehibe na fialantsasatra ankalazain'ny orinasanao. Ohatra, raha manana fantsona ho an'ny Vehivavy ianao, dia afaka manompo anao tsara ny famoahana horonantsary lehibe kokoa ho an'ny Fetin'ny Reny. Raha mamorona horonantsary ho an'ny atleta na indostrian'ny fanatanjahantena ianao, ny Super Bowl dia mety fotoana iray hamokarana horonantsary farany avo kokoa.
Misorata anarana amin'ny fiofanana Youtube an'i Owen anio!
Tags: videospotYouTubeyoutube marketingfampielezana marketing youtube
Owen Hemsath dia manam-pahaizana manokana amin'ny YouTube ary avotra amin'ny homamiadana. Ny filohan'ny Videospot, Owen dia nanangana orinasa manerantany amin'ny tsotra fantsona YouTube. Manam-pahaizana hajaina amin'ny lohahevitra mifandraika amin'ny YouTube, doka horonantsary Facebook, famolavolana tranokala ary marketing video izy.